अमेरिका र भारतका राष्ट्रपतिको तलब कति ? [ नेपालका राष्ट्रपति देखि सांसदकोसम्म समेत ]
काठमाडौ । अमेरिकामा अहिले राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर राजनीतिक सरगर्मि उच्च छ । सत्तारूढ रिपब्लिकन पार्टीको तर्फका उम्मेदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटकको कार्यकालका लागि अस्वीकृत बनेका छन् । विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फका उम्मेदवार पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन विजयी भइसकेका छन् ।
मतगणना जारी रहेकाले औपचारिक घोषणा भने भएको छैन । यता पराजित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हार स्वीकारपनि गरेका छैनन् । चुनावमा धाँधली भएको भन्दै पुन मतगणनाको माग गरिरहेका छन् । अब योबीचमा सबैको चासोको विषय हुन सक्छ की अमेरिकी राष्ट्रपतिको तलब भत्ता कति हुन्छ ? आज हामी यो चासोको निवारण गर्दैछौ ।
दुनियाँको सबैभन्दा शक्तिशाली देश हो अमेरिका । अमेरिकामा राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुन् । दुनियाँकै शक्तिशाली देशको प्रमुख कार्यकारीको तलब कति होला सबैको चासो पक्कै हो । अमेरिकी राष्ट्रपतिले हरेक बर्ष ४००००० (चार लाख) डलर तलब पाउँनेछन् ।
यो नेपाली रुपैयाँमा हेर्ने हो भने झण्डै ४ करोड ७६ लाख हुन्छ । यो तलब मात्र हो । यो तलब भारतीय राष्ट्रपतिको तुलनामा लगभग ५ गुणा धेरै हो । नेपालीको त जम्मा एक बर्षको तलब २१ लाख ३० हजार मात्र छ यो तुलना योग्य नै छैन । भारतका राष्ट्रपतिको झण्डै ९५ लाख रुपैयाँ तलब छ । यो रकम नेपालीमा हो । अमेरिकाका राष्ट्रपतिलाई १७ प्रकारका भत्ता मिल्छ ।
१७ प्रकारका भत्ता मिल्छन्
अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई तलबसँगै १७ प्रकारका भत्ता मिल्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई हरेक बर्ष बार्षिक भत्ताको रुपमा ५०००० डलर, भ्रमण भत्ताका रुपमा कर रहित १००००० डलर, मनोरञ्जन भत्ताका रुपमा १९००० डलर प्रदान गरिन्छ । अमेरिकामापनि पूर्व राष्ट्रपतिको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बीमा दैनिक सञ्चालन खर्चपनि दिइन्छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको बार्षिक आय भन्दा थोर हो तलब
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पाउने तलब भन्दा उनको कमाई धेरै छ । उनको बिजनेशबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा तुलना गर्दा षे तलब नगन्य हो । राष्ट्रपति बन्नुभन्दा पहिले डोनाल्ड ट्रम्प रियल स्टेट (घरजग्गा कारोबारी) व्यापार थिए । यो ब्यवसाय अहिलेपनि चलिरहेको छ ।
यो ब्यवसायबाट उनले बार्षिक १ दशमलव ३ बिलियन डलर आर्जन गर्छन् । जबकि अहिले उनलाई तलबको रुपमा बार्षिक ४ लाख डलर मात्र मिलेको छ । यूएस कर कोड अनुसार राष्ट्रपतिको तलब बाहेक प्राप्त हुने सबै प्रकारका भत्तामा कर छुट छ । भत्ता सहित गर्दा भने मोटो रकम हुन जान्छ ।
भारतीय राष्ट्रपतिको कति छ तलब ?
भारतीय राष्ट्रपति कार्यकारी हैनन् । यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन्छन् । तर प्रधानमन्त्रीको भन्दा राष्ट्रपतिको तलब धेरै छ । भारतिय राष्ट्रिपतिले हरेक महिना ५ लाख रुपैयाँ भारु ( नेपाली ८ लाख रुपैयाँ) पाउँछन् । यो भन्दा बाहेक कयौँ भत्ता र सुविधाहरुपनि छन् ।
भारतमा पछिल्लो २०१६ देखि अहिलेसम्म राष्ट्रपतिको तलब बढेको छैन । भारतीय राष्ट्रपतिको निवास दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । जो ५ एकडमा फैलिएको छ । राष्ट्रपति भवनको रेखदेखका लागि हरेक बर्ष ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको भारतिय अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालीको कति छ ?
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को बजेटमार्फत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री र सांसदको तलव वृद्धि गरेपछि नेपालका राष्ट्रपतिको पनि केही बढेको छ । तर पछिल्लो बर्ष भने कसैकोपनि तलब बढेन । त्यो बर्ष विभिन्न श्रेणीका राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित कर्मचारीको तलबमा क्रमशः १८ र २० प्रतिशतका दरले तलब वृद्धि गरेसँगै राष्ट्रपतिदेखि सांसदको तलबमा समेत वृद्धि भएको थियो ।
राजपत्रांकितको तलब १८ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएसँगै राष्ट्रपतिको तलबमा २७ हजार रुपैयाँ र सांसदको तलबमा ९ हजार रुपैयाँ वृद्धि भयो । बढ्नुभन्दा अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मासिक तलब १ लाख ५० हजार ४ सय ५० रुपैयाँ रहेको थियो ।
१८ प्रतिशत वृद्धि हुँदा २७ हजार ८१ रुपैयाँ तलब बढेपछि राष्ट्रपति भण्डारीको तलब अघिल्लो बर्ष साउन महिनादेखि लागू हुने गरी १ लाख ७७ हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ पुगेको छ । हाल नेपालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको तलबमा १९ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ मासिक थप भएको छ । १ लाख ८ हजार ३० रुपैयाँ तलब मा थप भएपछि अहिले उहाँको तलब १ लाख २७ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मासिक तलब तलब १३ हजार ९ सय १० रुपैयाँ बढेसँगै ९१ हजार १ सय ९० रुपैयाँ छ ।
यसैगरी सभामुखको तलब ७९ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ छ । उपप्रधानन्त्रीको तलब ७६ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ छ । भने मन्त्रीको तलब ७१ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ छ । सांसदको तलबपनि ६५ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ छ ।
एक पिताले आफ्नी छोरीलाई दिएको यस्तो सन्देश, जुन पढ्दा संसार रोयो ! [एकपल्ट अबस्य हेर्नुहोला]
आमिर खानकी छोरी इरालाई १४ वर्षमै आफन्तबाटै, डिप्रेसनको कारण खुलाईन् सबै
भारतले पानीबाट चीन, पाकिस्तान, नेपाल र भूटानलाई संकटमा पार्ने रणनीति अख्तियार गर्दै
इभिनिङ वाकमा निस्किएकी अभिनेत्री मलाइकाको कालो देखिएपछि मानिसले मजाक उडाए
सीआईएको खुलासा : चीनमाथि मिसायल छोड्न तयार थियो रुस